Macluumaad ku saabsan Linux Mint 17 | Laga soo bilaabo Linux
Macluumaadka Linux Mint 17
Tesla | | Noticias
Iyada oo loo marayo barta rasmiga ah ee Linux Mint Waxaan ka dhawaajinaa war ku saabsan nooca cusub ee qaybintaan caanka ah ee ku saleysan Ubuntu.
Nooca cusub, oo aan xusuusanno wuxuu noqonayaa 17, oo lagu salayn doonaa Ubuntu 14.04. Maaddaama kan dambe yahay nooc leh taageero dheeri ah (Taageero Muddo Dheer ah) way iska cadahay in sidaas loo fikiray Mint 17 Waxay sidoo kale noqon laheyd, waana xaqiijisay Clement lefebvre. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu kaloo xaqiijiyay magaciisa rasmiga ah, «Qiana«.
Qiana waa fiber nylon ah oo la sameeyay horaantii 70meeyadii oo caan ka noqday goobaha lagu caweeyo, halkaas oo raggu ku xirtaan shaatiyada ay ka sameysteen duntaan.
Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale loo adeegsadaa magac dheddig ahaan Ameerika waana nooc ka mid ah Quiana, oo macneheedu noqon lahaa wax lamid ah xariir o macaan. Magac wanaagsan, haddii aan macnaha dambe u qaadanno, nooc ahaan LTS.
Noocaan Mint wuxuu la imaan doonaa afar dhadhan oo kala duwan iyadoo kuxiran deegaanka desktop taas ayaa loo xushay, sidii aan horay ugu baran jirnay Afartaani waxay noqon doonaan:
Waxaad ku leedahay iskuxirka bogga rasmiga ah adoo gujinaya badhanka soo socda:
Blog rasmi ah
Illaa iyo hadda wax cusub ma jiraan. Si kastaba ha noqotee, dib u eegista faallooyinka ogeysiiska rasmiga ah, qofku wuxuu helayaa mid leh weedh ah Clement koorsada cusub micnaheedu waa maxay Linux Mint. Markuu adeegsadehu weydiiyo inay nooc noqonayso LTS, wuxuu ku jawaabayaa:
Haa, waa sii deyn LTS ah (waxaan sidoo kale tixgelinaynaa salka 3 sii deynta ka dib marka loo eego isla saldhigga LTS).
Taasi waa, kooxda Linux Mint waxay tixgelinaysaa salka noocyada 18, 19 iyo 20 Ubuntu 14.04. Sida ay u hirgelin lahaayeen waa wax aan caddayn, maadaama ay tani weli tahay maado la baranayo.
Dhankeyga, waxaan u maleynayaa inay noqon laheyd go'aan wanaagsan in lagu saleeyo sii deyntaada nooca LTS de Ubuntu. Waxaan u maleynayaa in horumarinta noocyada cusub ay si dhakhso leh ugu socdaan qaybinta badankood marar badanna ay yihiin sheegasho kaliya oo loogu talagalay dadweynaha halkii ay ka ahaan lahaayeen horumar dhab ah.
Sideed u aragtaa xayeysiintan cusub? Waxaad jeclaan laheyd noocyada dhexdhexaadka ah ee u dhexeeya 17 iyo 21 in si fudud loogu cusbooneysiiyo isla aasaaska, qaabka Ubuntu 12.04.1, 12.04.2, 12.04.3,…? Mise waxaad ku qanacsan tahay inaad ka tagto horumarka sida ay hadda tahay?
Haddii ay dhacdo inaadan aqoon Linux Mint, Waxaan kaaga tagayaa falanqeyn yar oo aan u sameeyay 16 version:
Dib u eeg LM 16
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Macluumaadka Linux Mint 17
Faallooyinka ka imanaya dadka doonaya Linux Mint inay naftooda u huraan inay saldhiggoodu yahay Debian 3..2..1 ..
Haddii mustaqbalka fog Ubuntu uu bilaabo inuu fuliyo qorshayaashiisa sidaan ku naqaano (Mir, ururka kiniiniyada iyo miisaska, iwm.) Waa ikhtiyaarka ay tahay inay inta badan tixgeliyaan.
Wax la mid ah wixii Ubuntu ahaa maalintiisa. Hadda, haddii loo fuliyo in lagu saleeyo noocyada 'LTS' waxay horey u noqon laheyd tallaabo weyn. Waxaan u maleynayaa in noocyada soo noqnoqda ee Ubuntu iyo Mint badiyaa aysan waxba soo kordhin. Iyo in ka badan markii marar badan ay tahay inaad dib u rakibto maaddaama habka cusbooneysiintu wax jabinayo.
Sikastaba, waxa ugufiican ee ku saleysan Mint-ka Ubuntu waa inaad ka dhaxasho dhamaan qalabka ogaanshaha iyo sahlanaanta isticmaalka. Taas oo inbadan oo naga mid ahi ay jecelyihiin sababo kala duwan awgood.
Akhriso isbeddelada: Ubuntu marwalba waxay keeneysaa waxyaabo cusub hal ama dhowr goobood, waa distro horumar joogto ah). Mint waxay higsaneysaa inay noqoto mid ilaalin badan sidaa darteed isbeddelada badankood maanta waxay ku jiraan miiskaaga.
Taas markii la dhahay waa _surprising_ sida adag, dhakhso iyo sifiican ah qaabka horumarka Ubuntu 14.04 u shaqeeyo, waxaan isticmaalayay mudo bil ku dhow runtiina sifiican ayuu u shaqeeyaa, umana eka Ubuntu ^ _ ^
Khalad ha fahmin.
Waxaan ula jeedaa in marar badan noocyada la sii daayo maxaa yeelay jadwalka sii deynta ayaa la dejiyay. Maaha inaysan waligood wax cusub keenin, laakiin waa waxyaabo si fiican u cusbooneysiin kara.
Ceeb. jawaabtaydu waxay kujirtay faallooyinka @nosferatuxx 😛
Fadlan ka hel hoosta, mahadsanid!
Horaan u arkay! Hahaha maxaa qasan.
Waan kuugu raacsanahay! 🙂
In la sugo ayaa la yidhi tan iyo markii aan isticmaalayo dugsiga hoose oo igama tegin aniga oo ku qanacsan in aanan waligey ka tegin mint haha ​​🙂
Hagaag, nasiib daro in dadkani sii wadaan inay ku saleysnaadaan Ubuntu, waa inay aadaan Debian si ay wax uga sii xor ahaadaan ugana madax banaanaadaan Ubuntu wax walbana waa xor
Kaftanka dhinac, haddii aan doonayey inay ku saleysnaadaan Ubuntu LTS oo keliya, waa shaqo badan oo mashruuc aad u yar / dhexdhexaad ah oo ay u ilaalinayaan sida 3 nooc oo Ubuntu ah isla waqtigaas oo aysan haysan waqti ay naftooda ugu huraan inay wax cusub iyo la soco wixii ku soo kordha sida ugu macquulsan qalabkaaga; Xitaa waan ka caawin karay inay ilaaliso LMDE sababo la xiriira dadka isticmaala awgood (uma isticmaalo Debian laakiin ixtiraamka aan u hayo iyaga, waana wax fiican inay fududeeyaan, ma ahan wax aad u fudud oo dadka cusub ku cusub)
Jawaab Sam Burgos
Gebi ahaanba ku raacsanahay. Sidaan kor ku sheegay, waxay ii noqon laheyd guul aniga. Hayso saldhig xasilan oo leh softiweer hadda ka badan waxa aad ka heli karto Debian tusaale ahaan. Sidoo kale, sidaad sheegto, waxay noqon laheyd shaqo yar iyo waqti badan in loo hibeeyo faahfaahinta sifaynta.
Haddii aad horey u soo martay khibrad sameynta jawi oo aad wax ka taqaano GNU / Linux, maxaad u sameysan laheyd wax walboo adaag ah maxaa yeelay waxaad ku sii tiirsaneysaa Ubuntu.
Waxaan u maleynayaa sababtoo ah Ubuntu wuxuu siiyaa iyaga barnaamijka iyo saldhigga iswaafajinta ee ay ugu baahnaayeen inay abuuraan Cinnamon, tusaale ahaan. Sikastaba, ma aqaano inta horumariyayaal Mint hadda haysato ama haddii kaabayaashaasi ay bixin lahaayeen si loo abuuro wax kala fog iyadoo la ilaalinayo tayada qeybinta. Aynu in yar sugno oo aynu arki doonno sida bilaha soo socda ay u dhacaan. Waqtigan xaadirka ah, waxaan haynaa Mint LTS oo muuqaal ah oo na siin doona 3 sano oo nabdoon oo maskaxeed. Haddayna ufiicnaato nooca 16. Waxay noqon doontaa ostia.
In la yiraahdo Mint wax cusub ma noqon doono cadaalad darro weyn. Taageerada MATE markii cidina aamminsaneyn, horumarinta qorfaha, aaladda cusub ee lagu maareeyo PPAS ...
Mana u maleynayo inay waxyeello leedahay ku tiirsanaanta Ubuntu. Haddii ay jirto wax faa'iido ah oo Ubuntu leedahay, waa inay horay u bixisay Debian saaxiibtinimo. Waxaa jira waxyaabo badan oo loo yaqaan 'distros' oo u adeegsada saldhig ahaan, wax ma u saxnaan doonaan?
Taasi lafteedu waa gargaar shaqo Mint. Haddii ay si toos ah ugu salaysnaan lahayd Debian, Mint waxay u baahan tahay inay qabato shaqadaas lafteeda, mana u maleynayo inay haysato ilo ku filan, ama xaqiiqdii waxay leedahay wax badan oo ka yar kaniisadda, taas oo horeyba u qabatay, oo si wanaagsan loo qabtay.
Fikradan LTS waxay ila muuqataa aniga mid aad ufiican, waxayna muujineysaa fekerkeyga, sababta ku tiirsanaanta Ubuntu ay ugafiican tahay inaad si toos ah ugu tiirsanaato Debian, maxaa yeelay waxaad u heelan kartaa ilahaaga inaad horumariso oo aad dayactirto bii'adaha kale ee desktop-ka iyo aaladaha cusub, oo aadan ku xirneyn dib-ula-qabsashada iyo dib-u-habeynta xirmooyinka Debian.
MATE waa wax aan micno lahayn, waa mashruuc qof nostalgic ah oo ay ku soo biireen kuwa kale waqti badan oo firaaqo ah.
AYAAN, runti? Iyada oo ay jirto Xfce, waa maxay isbeddelka dabiiciga ah ee GNOME2? Salaan !!!
MATE, mashruuca caadiga ah ee 'loogu talagalay teh lulz'.
Hagaag haa, MATE si dhab ah. Jeclaaw ama ha jeclaan, waa mashruuc sii socda oo koraya, waxaa hadda lagu taageeray Debian repos tusaale ahaan.
Ubax maalin uun ma ay ahayn, oo miyaad garanaysaa sababta? Sababtoo ah waxay umuuqataa inay jiraan nostalgic badan oo aad qiyaasi karto. Intaas waxaa sii dheer, wax qalad ah kuma jiraan nostalgic wax kasta, taasna waxaan uga hadlaynaa software-ka bilaashka ah, sidaa darteed waxaa jira waxyaabo badan oo beddelaad ah oo mid kastaaba helo midka uu ugu jecel yahay. Fadliga Mint, inaad aragtay oo aad taageertay.
Ma jecli MATE, ma waxaad u malaynaysaa inay tahay wax duugoobay? Ha u isticmaalin. Laakiin anigu uma maleynayo inay adiga kugu xun tahay in kuwii jeclaa Gnome2 ay sii wadi karaan adeegsigooda hadda. Si loo soo rogo deegaanno desktop ah, nidaamyo shaqo iyo fikrado u gaar ah, nidaamyo iyo lahaansho kale ayaa durba jira.
Xfce ma ahan isbedelka Gnome2, waa deegaan horey u jiray oo leh shaqsiyad u gaar ah. Xfce maahan Gnome2, waa wax kale inkasta oo ay waxyaabo badan wadaagaan
Waxaan isticmaalay Xfce, laakiin markii aan helay Mate, waan hayaa midkaas, waa mid aad u dhameystiran oo xasilloon, oo leh adeegsi isku mid ah oo kheyraad ah, waxaan doorbidayaa inay sii wadaan horumarinta Mate, halkaasna ay wax ka sii fiicnaato, laakiin Xfce waa laga soo furtay hal dhinac, sannado ka hor Waxay yiraahdeen waxay sii deynayaan nooca 4.12 oo xitaa ma ahan kalabar horumarka waxayna leedahay dhibaatooyin dhowr qaabeyn ah.
Sikastaba, waxaan doorbidayaa KDE ama Cinnamonm, laakiin Mate waa bedel wanaagsan oo khayraad hoose ah
Waad ku mahadsantahay cadeyntaada!
XBD vda leh qaab dijo
Sida ay ku yiraahdaan linux kasta oo qaata distro iyo desktop-ka ay jecel yihiin, waxaan ku bilaabay Mandriva ka dib waxaan dhaafiyey Ubuntu oo waxaan ku dhammeeyey Mint, laakiin desktop-ka, marwalba waan jeclaa Mate, laakiin mar aan tafatirinayey sawir aad u weyn, wuu cuslaa Aad ayuu u badnaa, waxay qaadatay waqti dheer in sawirka la saxo, waxaan ka aqriyay webka in desktop-ka XCFE uu ka fudud yahay Mint-ka, waxaan bilaabay inaan rakibo ka dibna dib ayaan ugu laabtay si aan u tifaftiro sawirkeyga runtii OO waan layaabay xawaaraha aan ku saxaa, maalintaas marwalba waxaan isticmaalaa XCFE, waxba ugama badalo, laakiin taasi hadaad saxantahay qalad yar ayey leedahay 😛 laakiin waan ka cafiyaa xawaaraha
Ka jawaab XBD vda qaab
Qof ayaa garanaya sababta tijaabada debian uusan u fulin qorista sh markay laba jeer gujineyso feylka (horey ayey u leedahay rukhsad dil). Ma helayo sanduuqa oranaya 'ordaya terminal show jooji run'
Sideen uga dhigaa rinjiyeyntaas inay soo baxdo?
Mint iyo Ubuntu? Weli waa sheeko jacayl ka wanaagsan fiidkii XD
Ku jawaab Raistlin
Waa go'aan wanaagsan dhamaadka maalintaan distoorkan ayaa ah midka aan marwalba kula taliyo dadka cusub ee doonaya inay ka haajiraan Windows ... Laakiin annaga oo sanado ku jirna tan, ma taageeri lahayn inaan Sanado ku qarash gareeyo nooc isku mid ah ee VLC, libreoffice, GIMP. kuwa kale….
Waxaan had iyo jeer u baahanahay barnaamij cusub oo casri ah
Waxay kuxirantahay dookhaaga shaqsiyeed. Tusaale ahaan, anigu dan kama lihi inaan yeesho isla nooca VLC, maadaama waxa kaliya ee aan doonayo ay tahay inay aniga ii daawato fiidiyowyo. Oo weliba waxaan arkay dad haysta Debian deggan oo si raaxo leh uga shaqeeya.
Dabcan, Firefox iyo Thunderbird waxaan jecelahay inaan markasta ku haysto nooca ugu dambeeya. Sida aad u aragto, arrin dhadhan. Waxaan kaloo arkay dad haysta Debian xasiloon oo si raaxo leh ula shaqeeya iyagoon ka walwalayn noocyada barnaamijyada.
Maaddaama aan ahay isticmaale Linux oo cusub (2009 - hadda) waxaan leeyahay: (aragtidayda)
Mint wuxuu ku leeyahay sumcadiisa mahadsanidiisa ku saleysan ubuntu iyo badanaa khilaafkii jiray (iyo laga yaabee inuu wali yahay) horumarinta gnome 3 iyo desktop desktop oo ku dhiiri galiyay Clem inuu dhaqso u dhaqaaqo sidaa darteedna waxaan leenahay qorfe iyo asxaab, isaga oo kala goynay muhiimadiisa LXDE iyo KDE. (Si fiican ayaan u socdaa ama waan soo laabanayaa)
LMDE illaa iyo inta aan ka fahmay mashruuc ka socda koox adeegsada Mint ee Isbaanishka (ma khalad baan ahay?) Sababtoo ah waxay ku xayeysiinayeen bogga kooxdooda.
Aniga aragtidayda Mint waxay ahayd inay haysato gnome 2.32 mudo dhowr sano ah uguyaraan, xoogaa fiiro gaar ah siiya LXDE iyo / ama KDE intaad raadineyso ama horumarinayso waxyaabo kale, sikastaba may dhicin; laakiin Mint wali waa halkaan.
Waxa adeegsadayaashu ay isku dayi karaan ayaa ah inaan nafsadeena ka maqalno shirarka Mint si ay u tixgeliyaan tixgelinta iyo yaa garanaya, laga yaabee in sanadaha qaar Mint ay debian u noqon doonto saldhig.
Sii wadida dayactirka GNOME2 waxay ahayd wax aan micno lahayn dhowr sababood awgood, iyaga waxaa ka mid ah in qaabdhismeedka dhammeystiran uu horeyba u ahaa OBSOLETE waqtigaas, oo aan ku xusin in la xajiyo oo la sameeyo khiyaamo iyo bidco aan la sheegi karin si ay usii wadato shaqada laba sano oo dheeri ah ... in la doorbidi lahaa in si toos ah loogu beddelo Xfce oo soo bandhigaysa isla shaqeynta laakiin leh qaab dhismeed casri ah.
Waan jeclahay qorfaha, maadaama ay horumarinayso waxay umuuqataa inay kusocoto wadadeedii si ay u noqoto iskudhaf udhaxeeya qaabkii hore ee GNOME2 / Xfce / LXDE iyo shaqadii KDE SC.
Waxaan kuu soo iibinayaa kan Gnome 2 horey u duugoobay, laakiin waa waxa dad badani sii wateen inay isticmaalaan qaarna waxay bilaabeen inay seegto markii Gnome3 soo baxday, iyada oo wax yar oo hargab ah oo wali haysay halka Mate uu helay bisayl / xasillooni hor leh.
Qorfaha wuxuu u muuqdaa mid wanaagsan haddii aan sidoo kale u maleynayo inay qaadanayso xoogaa KDE gnome iyo xfce ah, in kastoo aan u wareegay LM KDE oo aan ugu mahadcelinayo Elav Developer.
Dhab ahaan! IMHOna waa aragti qaldan in aasaasaha Ubuntu uu leeyahay ilaa markii ay waydiiyeen waxa uu u malaynayo inuu Ubuntu u rogo wareejin semi-rogid ah wuxuu yidhi «haa, xaqiiqdii waxay noqon lahayd mid xiiso leh oo wax ku ool ah, runtiina waxay qaadan doontaa wax badan oo naga shaqeeya tan iyo markii aan dayactireynay laamo kala duwan waa qaali mana aha wax macquul ah, laakiin waxaan waayi laheyn wax muhiim ah: qodobka WOW oo leh sii deyn kasta oo cusub. "
Iyadoo 14.04 ay muujiyeen in Ubuntu ay wax badan isbeddeleen oo ay ku jirto meel ay ku noqon karto nus-wareeg ah. Waxa IMHO Mark uusan arkin ayaa ah in aysan wax dhibaato ah ka jirin sii wadida sii deynta ISO-yada cusub ee joogtada ah ee lagu dhawaaqayo astaamaha cusub ee nidaamka lagu soo daray.
Laakiin haa, waa run, jadwalka taariikhda ayaa marar badan calaamadeeya waxa lagu daro iyo waxa aan lagu darin nooc kasta laakiin haye, soo saarista softiweerka xirfadeed waxay leedahay xawaare waali ah qof kasta oo ka soo shaqeeyay shirkad tiknoolajiyad leh si wanaagsan ayuu u garanayaa in ujeedku yahay, waa maxay raadin, marar badan macquul maahan in la gaaro waana inaad ku qanacdaa guulaha yar yar!
Muxuu salami, ka xumahay, jawaabtaasi waxay ahayd @Tesla 😛
Fiiri, runtii waan ka helay GNOME2 maxaa yeelay waxay umuuqataa mid nadiif ah oo wax ku ool ah - in kastoo SHAQO LA'AAN, dabacsanaanta iyo awoodda codsiyada KDE iyo qaabdhismeedku lama tartami karo.
Haatan MATE, ujeeddo ahaan, ujeedo ahaan, waxay iila muuqataa wax aan micno lahayn. Hadday halkii ay ka rogi lahaayeen giraangiraha si ay u sii noolaadaan nidaamka deegaanka, waxay ku dhejin lahaayeen tamarta Xfce, hubaal u guuritaanka GTK3 iyo isbeddelka dambe ee DE ayaa ka dhaqso badan oo ka xoog badnaan lahaa.
Laakiin haye, tani waa F / LOSS iyo sida Linus u yiraahdo "haddii aysan madadaalo ahayn, maxaad u sameysaa!?" Shaki la'aan maqaarka ka dambeeya MATE ayaa lagu sasabay abuurista mashruucaas intii lagu biiri lahaa wax horey u jiray.
Ma aqaano inay fududahay, oo Mate horeyba waan u wada qabtay, kaliya waa inaan xoqaa, u fiirso inaysan waxba ku darin wax ku dhow, waa isla desktop-kii Gnome 2.
Xfce, dhanka kale, waxay ubaahantahay horumarin badan iyo waqti dheeri ah, marka lagu daro horumarkiisa gaabiska ah, waxay sheegeen sanado badan inay sii deynayaan 4.12 oo aysan wali kalabar wali gaarin.
Isbarbar dhiga Xfce-ka maanta iyo Mate, waxaan uqaadaa Mate shaqsiyan, waxay umuuqataa mid aad u xasilan oo ii kooban.
Xaqiiqdii ma arko shey kasta oo Mint uu ku saleysan yahay Ubuntu, meeshii ay ka kasbadeen adduunka Linux, xitaa dembi ma ahan mid madaxbannaan. Farsamo ahaan waxaan kahadleynaa waxa kaliya ee isku badala noocyada 18,19, 20 iyo XNUMX waa barnaamijka Mint, hadii kale wax waliba waa isku mid.
Waxaan u kuurgalay waxyaabo ay ka mid yihiin Mint, Nanny, Mint Welcome, Mint, upload, Mint Install oo ficil ahaan duugoobay, kaliya waxay hagaajistaan ​​cilladaha gudaha iyadoo wali ay isku ikhtiyaar iyo qaabab isku mid yihiin, taasi waa waxyaabo duug ah. Waxay ku qasbanaan lahaayeen inay abuuraan isbeddel, ku dar fursado badan, menus maxaa yeelay waxaa jira qalab aan caawinaad lahayn ama ku saabsan menus lahayn.
Sidaa si la mid ah, qorfe waa mid aan xasilloonayn oo sii wadaya adeegsiga aaladaha gnome-ka sida Maamulaha Luqadda, ama Qalabka dhawaaqa, fargeeto waxtar ayey yeelan kartaa, malaha Mint waxay u baahan tahay kafaala-qaade weyn si ay waxyaabo badan u hesho, tusaale ahaan Dugsiga Hoose OS wuxuu ka sarreeyaa Ubuntu qalab. Maxay reexaanta awood u lahayn inay sameyso?
Hagaag, in lagu saleeyo Ubuntu LTS waxay u oggolaan doontaa iyaga inay xoogga saaraan hagaajinta Cinnamon tusaale ahaan, marka lagu daro qalabka Mint u gaarka ah. In kasta oo la adeegsanayo nooca 2 bilo yar haddana waa inaan dhahaa waa xasillooni ku filan in loo isticmaalo nolol maalmeedkaaga.
Waxaan kaliya la kulmay dhowr dhibaato (oo aan u maleynayo Banshee) oo lagu xaliyay: Alt + F2 iyo markii tarjumaha amarka soo baxo la dhigo: f oo lagu dhufto Enter. Tani waxay dib u bilaabeysaa qorfe iyadoo barnaamijyada furan. E voilà! Dhibaatada la xaliyay.
Sida @msx yiri: "Waan jeclahay qorfaha, sababta oo ah sida ay u horumartay awgeed waxay umuuqataa inay kusocoto wadadii ay ku noqon laheyd iskudhaf udhaxeeya qaabkii hore ee GNOME2 / Xfce / LXDE iyo shaqeynta KDE SC."
Waxaan jeclaan lahaa wax ka badan qorfaha leh shaqeynta KDE.
Laakiin dhibaatada leh qorfaha ayaa ah in dhowr tufaax aysan shaqeyn oo haddii aad tufaaxyada u jiido baarka deegaanka oo dhan uu xirmo, laga yaabee inay tahay ka soo haajirida qorfe 1.4 ilaa 2.0, waxaan isticmaalaa mint 13 maya.
Mar dambe kaama jawaabi karo maxaa yeelay waxaan isticmaalaa kaliya tufaaxyada sida caadiga ah ku yimaada weligoodna wax dheeraad ah kuma darin. Maxaa intaa ka sii badan, xitaa waxaan ka saaraa qaar ka mid ah kuwa ku yimaada asal ahaan, XD.
Waxaan u maleynayaa in sida LTS ay tahay inay noqoto mid weyn ...
Jawaab Mario Guillermo Zavala Silva
Waxaan rajeynayaa sidaas! Waxaan rajeyneynaa inay u egtahay nooca 16.
Hagaag, waan jeclahay wararka horeyba u soo baxay haddii aan rabo inaan tijaabiyo daabacadda KDE
JF Duhamel dijo
Waa run in Linux Mint 16 (waxaan u isticmaalaa qorfe) si fiican u shaqeeyaa, oo waxaan kaliya ku tijaabiyay mashiinka Ubuntu 14.04 oo leh Unity iyo Gnome, kan dambe ima qancinayo gabi ahaanba, marka laga reebo xawaaraha bilowga. Waxaan sidoo kale isku dayay Open SUSE, Fedora, laakiin aniga aragtidayda Linux Mint ayaa ah "mid saaxiibtinimo badan", runtiina waxay sahlaysaa aqbalaadda Linux dadka aan geeky ahayn. Waxaan rajeyneynaa in Mint ay ku sii socoto khadkan. Shirkadda aan ka shaqeeyo, ansaxinta Mint 6 Cinnamon si loogu beddelo Windows 1 16 jajab ayaa si dimoqraadi ah loo doortay, ka dib toddobaad la helay iyo shaqaalaha maamulka iyo farsamada 7 ee 64. Barta heshiiska guud: muuqaalka muuqaalku wuxuu si weyn u fududeeyaa kala-guurka isticmaalayaasha Windows, iyo adeegsiga libreoffice waa mid dabiici ah (ayuu yidhi xoghayntaydu, kaftan ahaan, waa la tirtiray xafiiska 2007 oo waxay ku xirtay LO / windows iyada oo aan iyada la socodsiin). Loogu talagalay 2 farsamayaqaano (horumariyayaal ku saabsan microsystems), wax yar oo DIY ah labada maalmood ee ugu horeysa, laakiin wax waliba waa caadi hada waana shaqeynayaan dhibaato la'aan ilaa 6 bilood. Aan tirineynin kalsoonida weyn ee iskuxirka internetka (fiiruska dambe majiro).
Merci Clément, waxaad tahay horyaal.
Jawaab JF Duhamel
Waxaan rajeynayaa in Ubuntu marka lagu daro Rolling Rellease ay noqon doonto gees dhiig leh.
LTS way fiicantahay inay kaa tagto softiweer hore, laakiin nooca horumarinta waa inuu lahaadaa kii ugu dambeeyay, uguyaraan wuxuu leeyahay barnaamijyadii ugu dambeeyay.
Dhinaca kale, noqoshada sii-deynta duudduuban waxay kaa caawin kartaa inay fududeyso inaad haysato ppas-ka
Sol M. Visuetti dijo
Aad ayuu u qurux badan yahay Laakiin si ka duwan lint mint Petra, kuma rakibi karo qoraalkayga ip ip 17 LM 1300, oo si fiican u rakibaysa LM 16. Waa wax laga xishoodo, xitaa sababta oo ah taageerada dheer (LTS) marka loo eego LM 16. Waxaan jeclaan lahaa inay wax qabtaan oo ay la socdaan bakhaarrada si loo rakibo daabacadaha kantarka inkjet. Caqli gal maaha in laga fekero in la rakibo qalab kale, waa inaan qodayaa madbacadaheyga oo aan raadiyaa qaar ay taageerayaan ubuntu 14.04 ama Linux lint 17.
Jawaab Sol M. Visuetti
issa bonachea dijo
macluumaad wanaagsan, laakiin waxaan doonayay inaan ogaado sida loo soo dejiyo: 3
Ku jawaab issa bonachea
Xiriirinta soo socota waxaad ku leedahay dhammaan noocyada la heli karo si aad u soo dejiso:
Haddii kombiyuutarkaaga uu awood leeyahay waxaan kugula talinayaa nooca Cinnamon ama KDE, haddii uusan aheyn nooca Mate ama Xfce.
Maxay tahay sababta KaOS aan u doortay?
Bitnami: Ku rakib codsiyada websaydhka habka ugu fudud